Hiit ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်သိကောင်းစရာများ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Paco မာရီယာ Garcia က | | fit
အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်အပြင်ကြွက်သားများကိုသတ်မှတ်ပါ၊။ ၎င်းသည်များစွာသောလူတို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များပါ ၀ င်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်များဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နှင့်အခြားသူများအတွက် Hitt လေ့ကျင့်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤ Hiit ပရိုဂရမ်များသည်လက်ရှိတွင်အလွန်ခေတ်စားသော်လည်း ၎င်း၏မူလအစနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကိုမှကြွလာ။ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သူအချို့သည်မြန်နှုန်းမြင့်ကဏ္sectionsများနှင့်အစည်းအဝေးများကို အသုံးပြု၍ အခြားပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်လဲလှယ်ကြသည်။ ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှာဖင်လန်နည်းပြလော်ရီပစ်ဟီလာကနည်းစနစ်တစ်ခုစံသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Japan Izumi Tabata နှင့်သူ၏ကျော်ကြားသော "Tabata Protocol" ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုပြည်တွင်းလေ့ကျင့်ရေး (Hiit) သည်ယနေ့လူကြိုက်များသည်။ သို့သော်အားကစားသိပ္ပံပညာ၌ဤအထူးကျွမ်းကျင်သူ၏အဆိုပြုချက်များသည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
1 Hitt သင်တန်းဆိုတာဘာလဲ။
2 တစ် ဦး လူကြိုက်များနှင့် '' ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 'အလေ့အကျင့်
5 စည်းချက်၏ပြောင်းလဲမှု: သော့
6 Hiit သင်တန်း၏ဆန့်ကျင်မှုများ
၎င်းတွင်လေ့ကျင့်ခန်းတိုတောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအလွန်မြင့်မားစွာပြုလုပ်ပြီးအခြားသူများပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်နှေးကွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမြန်သောပြေးနှုန်းဖြင့်မြန်သောပြေးလမ်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အချို့သောမျိုးကွဲများတွင်လေ့ကျင့်သူများ၏ကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်အလေးများကို အသုံးပြု၍ ခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သည်။
အများဆုံးပြင်းထန်မှုကာလနှင့်အနားယူရန်စီစဉ်ထားသောအချိန်ကာလများသည်စက္ကန့် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်းကြာသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်စုစုပေါင်းမိနစ် ၃၀ ထက်မပိုပါ.
တစ် ဦး လူကြိုက်များနှင့် '' ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 'အလေ့အကျင့်
အများပြည်သူအကြားလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအမျိုးအစားများသည်အောင်မြင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအားကစားရုံတွေ၊ အပြင်မှာ၊ နွေရာသီအားလပ်ရက်အလယ်မှာ၊ အိမ်မှာတောင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုအထူးပစ္စည်းကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအားကစားသမားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကိုဤလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။ ဘတ်စကတ်ဘောနှင့်ဘောလုံးကစားသမားများပင်ဂိမ်းတစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသောနာရီပေါင်းများစွာကိုခုခံနိုင်သည့်နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ အချို့သောကာယလေ့ကျင့်ရေးသမားများက၎င်းကိုအကြံပြုသည် အလေးမခြင်းသင်တန်းမစတင်မီ“ နွေးထွေးခြင်း” နည်းလမ်း.
ထို့အပြင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးစိတ်ဝင်စားမှုများ၊ အရသာများ၊ ဦး စားပေးမှုများနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူဖြစ်သည်။
Hiit လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ထို့အပြင်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ခန်း, အလုပ်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ရေး, ခုခံနှင့်ပါဝါ။
ပြီးသားအပေါ်မှတ်ချက်ပေးသူတွေကိုအပြင် ကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ကြွက်သားများကိုတည်ဆောက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်, Hiit သင်တန်းသည်အခြားအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုလိုက်။
၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏အဓိကကြွက်သားများဖြစ်သောနှလုံးကိုလည်ပတ်စေသည်။ ဒါဟာအစအဘို့အဆောင်ရွက်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုပ်ထွေးသောသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကို "ညှိ".
၎င်းသည်သကြားဓာတ်နှင့်ပန်ကရိယလုပ်ဆောင်မှုပြproblemsနာများရှိသူများအတွက်အကြံပြုထားသည့်အလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်မီ အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်လွယ်စေတယ်၊.
ထာဝရလူငယ်၏အိပ်မက်မက်သူများအတွက်, Hiit လေ့ကျင့်ရေး အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေး.
ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ် Sprinting အပြင်, Hiit လေ့ကျင့်ခန်းတွင်ခုန်ခြင်း၊ အဆုတ်နှင့်ထိုင်ခြင်းစသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သည်; အစီအစဉ်များတွင်“ burpees” သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် flexion နှင့် extension၊ “ shadow boxing” နှင့် site on running ကဲ့သို့သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းအချို့တွင်အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သည်။
၎င်းသည်ပုံမှန်ပြေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် အတားအဆီးတွေကိုညှိနှိုင်းစရာမလိုဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုခု။ ၎င်းတွင်အောက်ပါပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။
နွေးရန် 10 မိနစ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပြေး။
စက္ကန့် ၆၀ မျှ Sprintအများဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းစွမ်းရည်၏ 90% မှာ။
စက္ကန့် 30 ကျော် Jogအများဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းအများဆုံးစွမ်းရည်၏ 60% မှာ။ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ) ။
အများဆုံးပါဝါနှင့်အနားယူမှုသံသရာကို ၁၅ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သင့်သည်။
၎င်းတွင်လေ့ကျင့်ခန်းသုံးခုပေါင်းစပ်ထားသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နေရာအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြည့်အစုံပါဝင်သည်။
ကီထိုင်၏ 20 စက္ကန့် အပြည့်အဝပါဝါမှာ။
Planchas ၏ 10 စက္ကန့် (ကြွင်းသောအရာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ) ။
အပြည့်အဝပါဝါမှာ burpees ၏ 20 စက္ကန့်။
ပြား၏ 10 စက္ကန့်။
30 စက္ကန့်ပြန်လည်နာလန်ထူ, တူညီသောအရပ်၌ရပ်နေ၏။
ရိုးရာဘီးနှစ်ဘီးမော်ဒယ်တစ်ခုပေါ်မှာလား၊ နင်းခြင်းသည် Hiit လေ့ကျင့်မှုတွင်ပြုလုပ်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြင်ဆင်ရန်နှင့်နွေးရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောခြေနင်း၏ 10 မိနစ်။
အများဆုံးစွမ်းရည်မှာ pedaling ၏ 30 စက္ကန့်.
နူးညံ့သိမ်မွေ့နင်း၏ 15 စက္ကန့် (ကြွင်းသောအရာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ) ။
အများဆုံးပါ ၀ င်သည့်အခိုက်အတန့်များကိုအနားယူသူများနှင့် ပေါင်း၍ ရှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သင့်သည်။
ရိုးရာ "cardio" လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Hiit လေ့ကျင့်မှု၏အားသာချက်များမှာ အရှိန်အဟုန်နှင့်ပြင်းထန်မှု၏အပြောင်းအလဲများကို။ ၎င်းသည်ခန်ဓာကိုယ်အားစဉ်ဆက်မပြတ်စည်းချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက်အနားယူသည့်အခြေအနေသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ လိုချင်သောရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်လုံလောက်ပါသည်။
နေ့စဉ်ဘဝတွင် Hiit လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မပါဝင်မီအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ အကယ်၍ သူတို့ဟာအားကစားလှုပ်ရှားမှုအားနည်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုကိုခြစ်ရာကနေစရလိမ့်မယ်။
ဒီအလေ့အကျင့်တစ်ခု hypocaloric အစားအစာနှင့်ပေါင်းစပ်မရသင့်ပါတယ်။။ အခြားအရာများအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဂလိုင်ကိုဂျင်ပမာဏနည်းပါးခြင်းကြောင့်မူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်သတိလစ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဤလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပူးတွဲအခက်အခဲများရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကြွက်သားဒဏ်ရာများခံစားနေရသောလူများတွင်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ နှင့်အတူယောက်ျားမိန်းမတို့၌ရှိသကဲ့သို့တူညီသော သွေးတိုးရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်အတူပြနာများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » Hiit လေ့ကျင့်ရေး